MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): June 2006
Posted by MgHla Mandalay at 8:37 am
ဒီလိုမျိုး လေယာဉ်ကြီးတော့ စီးလိုက်ချင်သား... Adult Only
Posted by MgHla Mandalay at 10:21 am
www.planet.com.mm ကို လည်ပတ်နေကြတဲ့ Planet Team ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံတွေကို နားဆင်ချင်ရင် ဒီမှာ http://planetteam.blogspot.com သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်းပါ...
ဘောလုံးတော့ ၀ါသနာမပါဘူးဗျာ... ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလား ဖိုင်နယ်ပွဲဆိုရင်တော့ကြည့်တယ်... ခု ဘီအိုဒီ မီတင်ရှိတော့ စတန်းဘိုင်နေနေရတော့ အားသလိုလို မအားသလိုလို ဖြစ်နေတာနဲ့ တချိန်ချိန် မြန်မာအသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတွေဘာတွေ တက်နိုင်ရင် ၀တ်ရအောင် အင်္ကျီဒီဇိုင်း လုပ်ထားတာပါ... စိတ်ပါရင် နောက်ထပ် ထပ်လုပ်ဦးမယ်ဗျို့...
Posted by MgHla Mandalay at 8:03 am
Posted by MgHla Mandalay at 9:10 am
Posted by MgHla Mandalay at 8:27 am
ကျတော်တို့ မန္တလေးမှာ ရာသီဥတုက ပူသလား မမေးနဲ့ဗျို့... လာစရာရှိရင်တောင် မလာကြနဲ့ဦး... နေ့လည်းပူ၊ ညလည်းပူ.... ညဘက်ဆို အိပ်မရအောင်တောင် ပူလွန်းလို့ မနေ့ညက အိမ်မပျော်တာနဲ့ ၀ါသနာမပါတဲ့ ဘောပွဲ ထကြည့်နေမိတယ်... ပထမပိုင်းပြီးအောင်ပဲ ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ကြည့်တာ စိတ်ဝင်စားသွားတာနဲ့ ပွဲအဆုံးထိ ကြည့်လိုက်မိတယ်... ဘယ်အသင်းနဲ့ အဘယ်အသင်း ကန်တာလဲဆိုတော့ဗျာ အဖြူသင်းနဲ့ အနီလိုလို လိမ္မော်ရောင်လိုလို ၀တ်ထားတဲ့ အသင်း နှစ်သင်းကန်တာဗျ.... အနီသင်းနိုင်သွားတယ်လေဗျာ... အ၀ါကဒ်တွေဆို အလကားပေးသလား အောက်မေ့ရတယ်...
မီးကလည်း ပျက်တယ်ဗျ... ၄-ရက်ပေါင်းမှ ၂၄-နာရီ မီးလာတဲ့ စနစ်ဖြစ်တာ တစ်လခွဲလောက်ရှိပြီ... ကျတော်တို့ ရပ်ကွက် ထရန်စဖော်မာ ပေါက်တာနဲ့ အတူတူပဲ... မနေ့ညက မီးလာရက်ဗျ... မီးကြိုးပေါ် အုန်းလက်ပြုတ်ကျပြီး ရှော့ဖြစ်လို့တဲ့လေ တစ်ညလုံး မလာဘူး... ဘာနဲ့ ဘောပွဲကြည့်လဲလို့ မေးတာလာ စိနတိုင်းပြည်ကလာတဲ့ ခဏခဏ ပြင်ရတဲ့ မီးစက်လေးထဲကို ဓာတ်ဆီထည့်ပြီး နှိုးကြည့်တာခင်ဗျ... မီးစက် ဘယ်လောက် ပျက်သလဲဆိုတော့ အိမ်က အကိုတောင် မီးစက်ပြင်တတ်သွားပြီ....
နေပါဦးမောင်လှရ ခေါင်းစဉ်တင်ထားတာက “ ရေဘေးဒုက္ခသည် မောင်လှ ” ဆို ခုဘာတွေ ရေးနေတာလဲကွ.... စိတ်အေးအေးထားကြပါဗျာ.... ပြောပါ့မယ်... ဟုတ်ပါဘူး ရေးပါ့မယ်... ဒီလိုဗျ ဟိုးအရင်တုန်းကတော့ ကျတော်တို့ မန္တလေး တစ်မြို့လုံး ကျုံးရေကို အားထားရတာဗျ... နောက်ပိုင်း ကျုံးရေက မသန့်ရှင်းတော့လို့ ဆိုပြီး္ဘရာဝတီ မြစ်ကမ်းဘေးတွေမှာ အ၀ီစိတွင်းတွေတူးပြီး ရေးပေးနေတာဗျ... မီတာရေလို့ ခေါ်တယ်ဗျ.... အဲဒီရေက တစ်နေ့ကို ၁-နာရီလောက်ပဲလာတာ... ကြွက်သေးပေါက်သလောက်တောင် မလာဘူးဗျ... အိမ်က မီတာရေရှိအောင် မီတာရေယူ ထားတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ.... အိမ်မှာ ဘာနဲ့ ပုံမှန် သုံးတာလဲဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင် အ၀ီစိတွင်းတူးထားတာ ရှိတယ်ဗျ... ခု မီးမလာတော့ ရေတင်လို့မရဘူးဗျာ.... ရေမရှိတော့ ရေချိုးလို့ မရဘူးဗျာ.... ရေးချိုးလို့မရတော့ လူက အိပ်ရေးကလည်းပျက်ထားတော့ ညီစီစီနဲ့ ချဉ်နံ့တွေ ထွက်လို့ပေါ့ဗျာ.... တော်ပါသေးရဲ့ ရုံးက အခန်းထဲမှာ ၁-ယောက်တည်း နေရလို့ လူအများကြီးသာဆို မောင်လှ ရေမွှေး မွှေးမှ မွှေး ဖြစ်နေဦးမယ်.... ကျတော် အခန်းထဲ လာမယ်ဆိုရင် ကြိုပြောကြပါဦး... air fresher လေး ဖြန်းထားရအောင်လို့...
ဖြူဖွေးသော အသားအရေ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်း (Photoshop Tutorial)
ပြင်မယ့် ဓာတ်ပုံကိုဖွင့်ပြီး ဓာတ်ပုံ layer ကို duplicate (Ctrl+J) လုပ်လိုက်ပါ… မူရင်း layer ကို org ၊ ပွားထားတဲ့ layer ကို white လို့ အမည်ပြောင်းပေးပါ...
white layer ကို layer mask ထည့်ပြီး အနက်ရောင် ဖြည့်ပေးပါ...
white layer ကို Layer Palette က blending mode မှာ Screen ပြောင်းပေးပါ...
Foreground ကို အဖြူရောင်ရွေးပြီး Brush tool ကိုရွေးပါ... brush size ကိုတော့ အဆင်ပြေမယ့် အရွယ်အစားရွေးပြီး hardness ကိုတော့ 0% ပဲ ထားပေးပါ...
Layer Palette ထဲက white layer mask ကို click ခေါက်ပြီး select လုပ်ထားပေးပါ...
အသားအရေရှိတဲ့ နေရာတွေ၊ ပိုဖြူစေချင်တဲ့ နေရာတွေကို စုတ်တံ နဲ့ လိုက်ခြယ်တဲ့ အခါ ပိုမို ဖြူဖွေးတဲ့ အသားအရေ ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်...
ပိုဖြူချင်ရင်တော့ white layer ကို duplicate ထပ်ပြီး လုပ်လိုက်ပါ... အခြားနည်းတွေနဲ့လည်း ပြင်လို့ရသေးတယ် ခင်ဗျ... အသားမည်းချင်ရင်တော့ layer blending mode ကို multiply ထားပေးပါ...
Posted by MgHla Mandalay at 12:52 pm
သမီးလေး နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ အချိန်တိုင်း သူ့အမေ အလုပ်မအားတာနဲ့ အမြဲ တိုက်ကို တိုက်ဆိုင် နိုင်လွန်းတယ်... သူ့အမေက ခွင့်ယူဖို့ အဆင်မပြေဆိုတော့ အဆင်ပြေတဲ့ ကျတော်ပဲ ခွင့်ယူရတာပေါ့... ရပ်ကွက်ထဲက ပြောလှပြီ သမီးကို အမေထက် အဖေက ပိုချစ်တယ်ထင်ပါ့တဲ့... ကလေးနေမကောင်းတိုင်း အဖေကချည်းပဲ ခွင့်ယူပြီး ချော့နေလို့တဲ့လေ...
နေမကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း သမီးအမေ ခွင့်ယူလို့ရတဲ့ အချိန်မှ ဖြစ်ပါလားကွယ်... သမီးရေ နေမကောင်းတာ မဖြစ်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့ကွာ...
Posted by MgHla Mandalay at 9:59 am
လူတစ်ဖက်သား ထိခိုက်စေသောစကားများ မပြောပါနှင့်။
...ကိုနိုင်းနိုင်းစနေ ရဲ့ blog မှ ကူးယူဖော်ပြသည်...
အမှားပြင်ဆင်ချက် -ကိုနိုင်းနိုင်းစနေ မဟုတ်ဘူးတဲ့ မနိုင်းနိုင်းစနေတဲ့
အင်တာနက် မသုံးဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်း ခေါက်ခေါက်ကြီးက မင်းနာမည်တွေ ကြီးနေတယ်တဲ့... ကိုးကားပြီးရေးတာမှန်ပေမယ့် အရေးအသားတွေက တွယ်သလို ဖြစ်နေတယ်တဲ့... သတိထားဦးတဲ့... လို့ဆိုလာတဲ့အတွက် နာမည်ကြီးမှုကို မနှစ်သက်တဲ့ ကျတော် သတင်း၊ အတင်း၊ ကောလဟာလ အရေးအသားများကို လျော့ချပြီး ကိုယ်ပိုင်ဒိုင်ယာရီ အနေနဲ့ ဆက်သွားဖို့ လက်တလော ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းပါ...
ကျတော်ဟာ မိသားစုကို လုပ်ကြွေးနေရတဲ့ သာမာန်ပြည်သူ တစ်ယောက်ပါ...
နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေတောင်မှ ဖိအားပေးရင် ဘာခံနိုင်လို့လဲ... ကျတော်လဲ ဖိအားပေးမှု မခံရခင်... အရေးအသားများကို လျော့ပါတော့မယ်...
Personal Diray လေးအဖြစ်သို့ ပြန်အသွင်ပြောင်းပါတော့မယ်... အစကတည်းက ဒါလေးက ကျတော့်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီလေးပါ...
ကျတော့် မိသားစု ထမင်းကောင်းကောင်းစားရဖို့၊ ညကောင်းကောင်း အိပ်ရဖို့ ကျတော် နေရပါမည်... ဒါကို နားလည်ပေးစေချင်ပါသည်...
Posted by MgHla Mandalay at 8:26 am
Posted by MgHla Mandalay at 1:27 pm
ကျတော့်ရဲ့ avator အသစ်ပါ... စာလုံး အရောင်တွေက Gtalk စတိုင်ယူထားတာပါ... Google က သုံးတဲ့ အရောင်လေးတွေကို ကျတော်ကြိုက်လို့ အခုရက်ပိုင်း လုပ်စားနေတယ်ဗျာ...
ရုံးနားက သတ်သတ်လွတ် ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်လေး စဖွင့်တော့ တစ်ပွဲ ၂၀၀-ကျပ်တဲ့ ... ဓာတ်ဆီဈေးတွေ ပြောင်းလဲမှုလုပ်ပြီး သိပ်မကြာပါဘူး ၂၅၀ ဖြစ်သွားရော... ခု အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေ လစာလည်းတိုးပြီးရော ၃၀၀ တဲ့...
၂၅၀ လည်းဖြစ်သွားရော ဘိုင်ကောင် မောင်လှ မနက်စာ မစားပဲ အငတ်ခံနေတာ ကြာပြီဆိုပါတော့ဗျာ... သူတို့တွေသာ တက်.. ကျတော်တို့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလစာ တွေမှ မတက်ဘဲ... မလောက်မငှ ဖြစ်တော့ မနက်စာနဲ့ နေ့လည်စာ ပေါင်းစားရတဲ့ ဘ၀ရောက်သွားတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ...
နေ့လည် သုံးနာရီမှာ ပေးတဲ့ ကော်ဖီသောက်ချိန်လေးမှာတော့ ကော်ဖီသောက်နေသေးတယ်ဗျ... ဟိုနေ့က လူက ၂-ယောက် တစ်ယောက်က နက်စ်ဘလက် (ရန်ကုန်အခေါ် ဘလက်အော ဆိုလား အောဘလက် ဆိုလား) တစ်ယောက်က နက်စ်ပလိန်းနဲ့ လန်ဒန်သောက်တာ ၆၅၀ တောင် ရှင်းလိုက်ရတယ်ဗျ... လန်ဒန်က ၁-လိပ်လား ၂-လိပ်လား မသိပါဘူးဗျာ...ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကော်ဖီဖျော်ယူသွားပြီး သူတို့ဆိုင်မှာ မုန့်ပဲ စားသာ ကောင်းမယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ...
အေးဗျာ... စိတ်များညစ်ပါတယ်... ခု မနက်စာနဲ့ နေ့လည်စာ ပေါင်းစားရတဲ့ ဘ၀ရောက်နေပြီ... နေ့လည်စာနဲ့ ညစာ ထပ်ပြီး ပေါင်းစားရမယ့် ဘ၀ မရောက်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးဗျာ...
ကျတော် လစာဘယ်လောက်ရလဲ ဟုတ်စ... အေးဗျာ ကျတော် တစ်လကို မြန်မာကျပ်ငွေ တစ်ပုံးကျော်ကျော် ၀င်ငွေရှိတယ်ခင်ဗျ... အောက်ဆိုဒ်တွေ ဘာတွေတော့ လုံးဝမရှိတဲ့ ရုံးထိုင် ၀န်ထမ်းလေးပါ... ခုကျတော် အရက်မသောက်၊ ဆေးလိပ်မသော်၊ လောင်းကစားမလုပ်၊ အပျော်အပါး မလိုက်စားဘဲ မလောက်မငှ ဖြစ်နေတာပါခင်ဗျ...
ဟိုး အလုပ်စလုပ်တဲ့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တုန်းက တစ်လမှ ၂၀၀၀-ကျပ်ရတဲ့ အကူဘ၀လေးကို ပြန်တမ်းတမိတယ်ဗျာ... အဲဒီတုန်းက တစ်လကို ၃-ခါ လောက် ရွှေခိုင်မှာ အသေကိုင်နိုင်သေးတယ်ဗျ... အခုတော့ တစ်နှစ်ကို သုံးခေါက်လောက် ရွှေခိုင်ရောက်ဖို့ အနိုင်နိုင်ရယ်...
”သြော် ... ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ...” မဟုတ်တော့ဘူး ... ”သြော်... ကုန်ဈေးနှုန်း” လို့ ခေါင်းစဉ် ပြန်ပြောင်းရမယ် ထင်ပါ့...
Posted by MgHla Mandalay at 9:14 am
Nyi Lynn Seck >>> How to Install Zawgyi Unicode Keyboard
Posted by MgHla Mandalay at 9:08 am
မြန်မာ ယူနီကုတ် ဖောင့်တွေ ဘယ်လို သွင်းပြီး ဘယ်လို သုံးရမလဲ မသိသူတွေအတွက် ကိုညီလင်းဆက်က ပြောပြထားတာပါ...
ပထမဆုံး ဇော်ဂျီ လက်ကွက်ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီး အင်စတောလ် လုပ်ပါ။ [Link]။ စ က်ထဲတွင် အခြား မြန်မာ ယူနီကုဒ် အမျိုးအစားများ မရှိစေရန် သတိပြုရပါမည်။ ရှိနေခဲ့ရင် Uninstall လုပ်ပစ်လိုက်ပါ။ ဇော်ဂျီ အင်စတောလ် လုပ်ပြီးလျှင်-
အပြည့်အစုံ သိလိုလျှင် >>>
Posted by MgHla Mandalay at 4:06 pm
Posted by MgHla Mandalay at 10:15 am
Posted by MgHla Mandalay at 3:39 pm
အခုနေ့လည် (၂း၃၀)နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လမ်း၈၀ ၊ ၃၇ လမ်း - ၃၈ လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ သမာဓိ ကားပစ္စည်းဆိုင် နောက်ကျော ၀င်းအတွင်းမှာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားတယ်လို့ သိရပါတယ်... မီးသတ်ကားသံကားလို့ ခေါင်မိုးပေါ် တက်ကြည့်သော်ငြားလည်း မီးခိုးတွေမမြင်ရသဖြင့် မီးငြိမ်းပြီးမှ မီးသတ်ကား သွားတယ်လို့တောင် ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျား...
Posted by MgHla Mandalay at 12:45 pm
emo နောက်တစ်ခုနဲ့ xero ကို RGB မှာ ကြည့်ကောင်းအောင် အရောင်ပြင်ထားတာပါ...
ကျတော့် သူငယ်ချင်းကြီးက လုပ်ခိုင်းလို့ပါ... သူငယ်ချင်းကြီးရေ... ဒီရက်ပိုင်း ကလေး ဒီဇိုင်းတွေ လုပ်တာများသွားလို့ ကလေးအကြိုက်ထွက်နေရင် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ... မနက်ဖြန် ထပ်လုပ်ပေးဦးမယ်ဗျာ...
Posted by MgHla Mandalay at 8:36 am
မောင်ပုဂံနပ်ကလေးအတွက် logo ဆွဲထားပေးတာပါ…